Ulwazi -Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Ulwazi olusisiseko lokubopha iintambo zombane
Ukuzibophelela kweentambo zombane
Ukubopha iintambo zombane wemoto (ukubopha iintambo zeemoto) kuyaluqonda unxibelelwano ngokwasemzimbeni lonikezelo lwamandla kunye nezahlulo zombane ezahlukeneyo kwimoto. Intambo yokubopha iintambo isasazwa kwisithuthi sonke. Ukuba injini ithelekiswa nentliziyo yemoto, ke iintambo zokubopha ziinkqubo zenethiwekhi zemoto, enoxanduva lokuhambisa ulwazi phakathi kwamacandelo ombane ahlukeneyo esithuthi.
Zimbini iintlobo zenkqubo yokwenza izixhobo zokubopha iintambo
(1) Yahlulwe ngamazwe aseYurophu naseMelika, kubandakanya ne-China, inkqubo ye-TS16949 isetyenziselwa ukulawula inkqubo yokuvelisa.
(2) Ikakhulu eJapan: iToyota, iHonda, baneenkqubo zabo zokulawula inkqubo yokuvelisa.
Abavelisi beentambo zokubopha iimoto banolwazi lwabo kwaye banamathisela ukubaluleka kumava emveliso yekhebula kunye nolawulo lweendleko zekhebula. Izityalo zokubopha iintambo ezinkulu zehlabathi zixhomekeke kwiingcingo kunye neentambo, ezinje ngeYazaki, iSumitomo, iLeni, iGuhe, iFujikura, ikelop, iJingxin, njl.
Intshayelelo emfutshane yezinto eziqhelekileyo zokubopha iintambo zombane
1. Ucingo (ucingo lwevolthi ephantsi, 60-600v)
Umgca womgangatho kaZwelonke: QVR, QFR, QVVR, qbv, qbv, njl
Ukumakisha mihla le: AV, AVS, AVSS, AEX, AVX, cavus, EB, TW, she-g, njl.
Ukumakisha isiJamani: flry-a, flry-b, njl
Umgca waseMelika: Sxl, njl
Ukucaciswa okuqhelekileyo ziingcingo ezinendawo yecandelo le-0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 mm
2. esingxotyeni salo
Isingxobo (iqokobhe lerabha) sihlala senziwe ngeplastiki. Umqhubi wesiphelo sendlela ecinezelweyo ufakwa kuyo ukuqinisekisa ukuthembeka konxibelelwano. Izinto ezibonakalayo ikakhulu zibandakanya i-PA6, PA66, ABS, PBT, PP, njl
Icandelo elenziwe ngehardware, elitywinwe ngocingo ukuqhagamshela iingcingo ezahlukeneyo zokuhambisa imiqondiso, kubandakanya itheminali yamadoda, itheminali yabasetyhini, itheminali yamakhonkco kunye nesiphelo setyhula, njl.
Izinto eziphambili zezobhedu kunye nobhedu (ubulukhuni bobhedu bungaphantsi kancinci kunobhedu), kunye neakhawunti zethusi kwinxalenye enkulu.
2.Izixhobo ze-Sheath: I-bolt engenawo manzi, iplagi engaboniyo, ukutywina iringi, ipleyiti yokutshixa, i-clasp, njl
Ihlala isetyenziselwa ukwenza isixhobo sokudibanisa kunye nesiphelo sendlela
3. Ngokusebenzisa umngxuma iinxalenye zerabha zeentambo zokubopha
Inemisebenzi yokuxhathisa ukunxiba, ukungangeni manzi kunye nokutywina. Isasazwa ikakhulu kunxibelelwano phakathi kweinjini kunye nekhabhathi, ujongano phakathi kwekhabhathi yangaphambili kunye nekhabhathi (ekhohlo nasekunene iyonke), ujongano phakathi kweengcango ezine (okanye umnyango wangemva) kunye nemoto, kunye netanki lamafutha ugwebu.
4. Tie (ikliphu)
Eyokuqala, edla ngokwenziwa ngeplastiki, isetyenziselwa ukubamba iintambo zombane emotweni. Kukho amaqhina, izibopho zokutshixa imfutho.
5. Izinto zepayipi
Yahlulwe ngombhobho wamanzi, ipayipi yokufudumeza i-PVC, umbhobho we-fiberglass. Umbhobho osontiweyo, ipayipi ejijwayo, njl. Ukukhusela iihhafu zokubopha.
Ngokubanzi, malunga ne-60% okanye nangaphezulu imfutho isetyenziselwa ukubopha inyanda. Eyona nto iphambili kukuxhathisa kokunxiba okuhle, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukudodobalisa idangatye kunye nokumelana nobushushu kulungile kakhulu kwindawo enobushushu obuphezulu. Ubushushu ukumelana imfutho - 40-150 ℃. Izinto zayo zahlulwe ngokubanzi zaba yi-PP kunye ne-pa2. I-PA ibhetele kune-PP kuludaka lwedangatye kwaye inxiba ukuxhathisa, kodwa i-PP ingcono kune-PA ekukhuleni ukudinwa.
Umsebenzi wepayipi yokufudumeza i-PVC iyafana naleyo yombhobho. Umbhobho bhetyebhetye kunye nokugoba ukuxhathisa kokulunga kulungile, kwaye umbhobho we-PVC uvaliwe ngokubanzi, ke umbhobho wePVC usetyenziswa ikakhulu kwisebe lokugoba ukubopha, ukuze kwenziwe inguqu egudileyo. Ubushushu ukumelana ubushushu umbhobho PVC ayikho phezulu, ngokubanzi ngezantsi 80 ℃.
Imveliso yeTape: inxeba kumphezulu wentambo yokubopha. (yahlulwe nge-PVC, iteyiphu yesiponji, itheyiphu yelaphu, iteyiphu yephepha, njl. Iteyiphu yokuchonga esemgangathweni: esetyenziselwa ukuchonga iziphene zeemveliso.
Iteyiphu idlala indima yokubopha, ukunxiba ukuxhathisa, ukugquma, ukudodobeka kwelangatye, ukunciphisa ingxolo, ukumakisha kunye neminye imisebenzi kwinyanda yocingo, ejikeleza ngokubanzi malunga neepesenti ezingama-30 zezinto zokubopha. Zintathu iindidi zeteyipu yokuhombisa ucingo: iteyiphu yePVC, itheyiphu yomoya kunye nefayile yesiseko selaphu. Iteyiphu ye-PVC inokumelana kakuhle nokunxiba kunye nokudodobala kwelangatye, kwaye ubushushu bayo ukumelana malunga ne-80 ℃, ke ukusebenza kwayo kokunciphisa ingxolo akulunganga kwaye ixabiso layo liphantsi. Izinto zetape yeflaneli kunye nelaphu lesiseko selaphu sisilwanyana sasekhaya. Iteyiphu yeflaneli ineyona nto ibophelelayo yokubamba kunye nokunciphisa ingxolo, kunye nokumelana nobushushu malunga ne-105 ℃; Iteyiphu yelaphu ineyona ngxaki yokunxiba, kwaye ubuninzi beqondo lobushushu elimalunga ne-150 ℃. Izinto ezingalunganga eziqhelekileyo kwitheyiphu yeflannel kunye netape yesiseko selaphu kukudodobala kwedangatye kunye nexabiso eliphezulu.
Ulwazi ngentambo yeentambo zombane
Ukubopha iintambo zemoto ngowona mzimba uphambili wenethiwekhi yesekethe yeemoto. Ngaphandle kokubopha iintambo, akuyi kubakho isekethe yemoto. Okwangoku, nokuba yeyimoto etofotofo okanye imoto yoqoqosho, izixhobo zokubopha iintambo ngokufanayo ziyafana, ezenziwa ziintambo, izihlanganisi kunye ne-tape yokurhangqa.
Ucingo lwemoto lukwabizwa ngokuba yicingo elisezantsi-ombane, elahlukileyo kocingo oluqhelekileyo lwasekhaya. Ucingo oluqhelekileyo lwasekhaya lubhedu olulodwa lwengcingo, kunye nobulukhuni obuthile. Iingcingo zeemoto zizobhedu ezininzi ezingumtya oguqukayo, ezinye zazo zibhityile njengeenwele. Uninzi okanye uninzi lwentambo yobhedu ethambileyo isongelwe ngemibhobho egqunywe ngeplastiki (i-PVC), ethambileyo kwaye ekungekho lula ukuyaphula.
Ukubalulwa okuqhelekileyo kweentambo kwintambo zokubopha iintambo zemoto kubandakanya iingcingo ezinendawo enqamlezayo yecandelo le-0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 2.5, 4.0, 6.0, njl.njl. izixhobo ezahlukeneyo zokusetyenziswa kwamandla. Thatha ukubopha izithuthi njengomzekelo, umgca we-0.5 wokucacisa usebenza kwisibane sesixhobo, isibane sesalathi, isibane somnyango, isibane sophahla, njl .; Umgca wokucaciswa kwe-0.75 ulungele isibane sepleyiti yelayisensi, izibane ezincinci zangaphambili nangasemva, isibane se-brake, njl .; Umgca wokucaciswa kwe-1.0 ulungele isibane somqondiso wokujika, isibane senkungu, njl .; Umgca we-1.5 ulungele isibane, uphondo, njl .; umgca wamandla ophambili njengocingo lwejenerator yocingo, ucingo olusezantsi, njl njl. Oku kubhekisa kuphela kwimoto ngokubanzi, isitshixo sixhomekeke kwelona xabiso liphezulu lomthwalo ngoku. Umzekelo, ucingo lomhlaba lwebhetri kunye nelayini yamandla elungileyo zisetyenziselwa ngokwahlukeneyo iingcingo zemoto. Iidayimitha zazo zecingo zikhulu ngokulula, ubuncinci ngaphezulu kweemilimitha ezilishumi zesikwere. Ezi ngcingo "zeMac Mac" aziyi kudityaniswa kwezona zixhobo zintathu zokubopha.
Phambi kokulungisa iihadi zokubopha iintambo, umzobo wokubopha iintambo kufuneka uzotywe kwangaphambili, owahlukileyo kumzobo wesikim wesekethe. Umzobo wesekethe wesikimu ngumfanekiso ochaza ubudlelwane phakathi kwezahlulo zombane ezahlukeneyo. Ayibonisi indlela izinto zombane ezidityaniswe ngayo, kwaye ayichaphazeli ubungakanani kunye nokumila kwecandelo ngalinye lombane kunye nomgama phakathi kwazo. Umzobo wokubopha iintambo kufuneka uthathele ingqalelo ubungakanani kunye nokumila kwecandelo ngalinye lombane kunye nomgama phakathi kwazo, kwaye ubonakalise nendlela izinto zombane ezidityaniswe ngayo.
Emva kokuba ingcali yefektri yokubopha iintambo yenza ibhodi yokufaka iintambo ngokuhambelana nomzobo wokubopha iintambo, umsebenzi uya kunqumla ucingo kunye nocingo ngokwemigaqo yebhodi ye-wiring. Eyona ntambo yokubopha yesithuthi siphela yahlulwe yenjini (ucinezelo, i-EFI, ukuveliswa kwamandla, ukuqala), isixhobo, izibane, isixhobo somoya, izixhobo zombane ezincedisayo kunye nezinye izinto, kubandakanya iihashe eziphambili kunye nezikrweqe zesebe. Isikrufu esikhulu semoto sineentambo zokubopha amasebe ezininzi, njengepali yomthi kunye nesebe. Iphaneli yesixhobo yeyona ndawo iphambili yokubopha konke ukuqhuba kwesithuthi, esiya ngapha nangapha. Ngenxa yobudlelwane obude okanye indibano efanelekileyo kunye nezinye izizathu, ukubopha iintambo zezithuthi ezithile kwahlulwe kwazixhobo zokubopha entloko (kubandakanya isixhobo, injini, indibano yokukhanya ngaphambili, isixhobo sokupholisa umoya, ibhetri), izixhobo zokubopha ngasemva (ibandla lesisibane, isibane setranki), ihashe yophahla (umnyango, isilingi isibane, isigodlo sesandi), njl.njl. Isiphelo sentambo nganye iya kuphawulwa ngamanani noonobumba ukubonisa indibaniselwano yocingo. Umsebenzisi unokubona ukuba uphawu lunokudityaniswa ngokuchanekileyo kwiingcingo ezihambelanayo kunye nezixhobo zombane, eziluncedo ngakumbi xa kulungiswa okanye kutshintshwa indawo yokubopha. Kwangelo xesha, umbala wocingo wahlulwe wangumgca wombala omnye kunye nomgca wombala ophindwe kabini. Injongo yombala ikwacacisiwe, ngesiqhelo imilinganiselo esekwe ngumenzi wezithuthi. Imigangatho yeshishini laseTshayina ichaza kuphela umbala ongundoqo, umzekelo, umntu omnye omnyama osetyenziselwa ukucofa ucingo, i-red monochrome isetyenziselwa umgca wamandla, ongenakudideka.
Intambo yokubopha isongelwe ngocingo olukiweyo okanye itheyiphu yeplastiki. Ukukhuseleka, ukuqhubekeka nokulungiswa kokulungiswa, ukusongelwa ngocingo kususwe. Ngoku isongelwe ngeplastiki yokuncamathelisa. Isinxibelelanisi okanye ilug isetyenziselwa unxibelelwano phakathi kwehashe kunye neharness naphakathi kwehashe kunye nezinto zombane. Isinxibelelanisi senziwe ngeplastiki kwaye sineplagi kunye nesokethi. Intambo yokubopha idityaniswe neentambo zokubopha ngocingo ngesixhobo sokudibanisa, kwaye unxibelelwano phakathi kweentambo zombane kunye namalungu ombane luqhagamshelwe sisidibanisi okanye ilogo.
Ngokunyuka kokusebenza kwemoto kunye nokusetyenziswa okuthe gabalala kwetekhnoloji yolawulo lwe-elektroniki, izinto ezingaphezulu zombane zombane, iingcingo ezininzi ngakumbi nangakumbi, kunye neentambo zokubopha ziya kuba nzima kwaye zinzima. Ke ngoko, inqwelo-mafutha ehambileyo yazise ngoqwalaselo lwebhasi ye-CAN, isebenzisa inkqubo yokuhambisa okuphindaphindayo. Xa kuthelekiswa neentambo zombane zemveli, inani leengcingo kunye nezihlanganisi lincitshisiwe kakhulu, elenza ukuba kube lula ukwenza iintambo.